Dr Fidy Bariniaina manazava ny Homamiadan'ny nono - Madagascar Informations
28 octobre 2016 9 novembre 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire
Malaina hanao fitiliana ny aretiny Homamiadana ny vehivavy malagasy.
Aretina tsy mamela mahazo ny homamiadana saingy raha voatily mialoha dia azo sitranina tsara.
Aretina anisany mahafaty olona betsaka indrindra maneran-tany ihany koa izy. Mety hahazo ny vehivavy rehetra ny homamiadana ,manatombo kokoa ny taha ho an’ny vehivavy efa nahazohazo taona izany hoe ireo vehivavy tsy mampinono intsony sy ireo vehivavy tsy miteraka. Ny homamiadany nono sy ny tranon-jaza no tena tranga betsaka indrindra eto amin-tsika ka ny hopitaly HJRA irery ihany aloha hatreto no mitsabo io aretina io.
Raha ny fomba fisehony kosa indray dia misy fivontosana tsy marary mandendeha ao anatiny nono ,miha matevina ny hoditra mifanandrify amin’ilay fivontosana ary miha menamena ,mitombo ary lasa fery.
Tsy mihetsika intsony ilay fivontosana aorian’io ka lasa mandavaka sy miha maniry any anatiny.
Raha tsy voatsabo dia miha mihitatra manerana ny vatana iray manontolo. Trangana homamiadana manodidina ny 7 alina isan-taona no hita manerana izao tontolo izao. Raha tsy mitandrina sy tsy misy ny fanentanana hatao ireo vehivavy hanao fitiliana sy hitsapa nono matetika dia hitombo ny tahany voany homamiadana eto amintsika. Raha araka ny fanadihadiana natao dia tsy mazoto hanao fitiliana ny vehivavy malagasy noho ny tahotra sy noho ny tsy fahampiany ho enti-manana koa dia aleo tsy mitily ny fahasalamana.
Isaorana manokana i Dokotera Fidy Bariniaina
← XVIè Assises de la FIDEF: “Une profession comptable forte au coeur de l’Économie”
Vonona hiatrika ny fanadinam-pankana tokana ny CMR. →